Ogeysiiska Sharciga | Citeia
Ogeysiiskan sharci ayaa nidaaminaya isticmaalka websaydhka www.citeia.com (Wixii hada ka dambeeya loo yaqaan) WEBSITE-KA)
Waxyaabaha ku jira degelkan waxaa iska leh www.citeia.com
2. Isweydaarsiga la adeegsado
Boggan, waxyaabaha ku jira, iyo koodhkiisa asalka ah waxaa ilaaliya xeerarka hadda jira ee qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee ku saabsan hantida aqooneed, iyadoo dhammaan xuquuqdu ay dhowran tahay.
3. Adeegsiga Webka
Adeegsiga www.citeia.com waxay ballanqaadayaan inay si sharci ah u adeegsadaan websaydhka iyo waxyaabaha ku jira, iyadoo la raacayo sharciga Isbaanishka. Isticmaaluhu waa inuu ka fogaadaa:
Faafi waxyaabaha ku jira fal dambiyeed, rabshad, qaawan, cunsuriyad, ajnabi naceyb, aflagaado, difaaca argagixisada ama, guud ahaan, ka soo horjeedda sharciyada, qawaaniinta caalamiga ah ama nidaamka guud.
Soo bandhig fayrasyada kombiyuutarka shabakadda ama ku kac ficillo wax ka beddeli kara, kharibi kara, carqaladeyn kara ama abuuri kara khaladaad ama waxyeello u geysta dukumiintiyada elektarooniga ah, xogta ama nidaamyada jireed iyo kuwa macquul ah, labadaba www.citeia.com iyo sidoo kale dhinacyada saddexaad, ha ahaadeen mid jireed ama mid sharci, hay'ado, hay'ado ama ururo nooc kasta ha lahaadeene.
Caqabad ama horjoogso, si kasta iyo / ama teknolojiyad, marin u helka isticmaaleyaasha kale WEBSITE-KA iyo adeegyadeeda iyada oo loo marayo isticmaalka ballaaran ee ilaha xisaabinta iyada oo loo marayo www.citeia.com Sii wad adeegyadaada.
Soo gal koontooyinka emaylka ee isticmaaleyaasha kale ama aagagga la xadiday ee nidaamyada kombiyuutarka ee Mulkiilaha Bogga ama dhinac saddexaad, ha ahaado mid jireed ama mid sharci, hay'ado, hay'ado ama ururro nooc kasta leh, iyo, hadday ku habboon tahay, hel, kala-goyn, ogaad ama soo saar macluumaadka nooc kasta oo ay yihiin.
Isku dayga aan guuleysan ee waxa lagu sharxay sadarka hore sidoo kale waa mamnuuc.
Ku xad gudub ama ku xad gudub xuquuqda lahaanshaha aqooneed ama warshadeed, iyo sidoo kale ku xad gudubka qarsoodiga macluumaadka www.citeia.com ama dhinacyada saddexaad, ha ahaadeen jidh ama sharci, hay'ado, hay'ado ama ururo nooc kasta ha lahaadeene.
Isku ekaysiinta aqoonsiga isticmaale kale, maamullada guud ama dhinacyada saddexaad, ha ahaadeen mid jidheed ama mid sharci, hay'ado, hay'ado ama ururro nooc kasta ha ahaadeene.
Soo-saar, nuqul, qaybiso, la heli karo ama si kasta ha noqotee si guud ula xiriir, beddel ama wax ka beddel waxyaabaha ku jira WEBSITE-KA, inaad ka haysato ogolaansho cad mulkiilaha xuquuqda u dhiganta mooyee ama ay sharci ahaan loo ogol yahay iyadoo la raacayo xeerarka hadda jira.
Uruurinta xogta ujeedooyinka xayeysiinta iyo inaad dirto xayeysiinta nooc kasta iyo isgaarsiinta iibka ah ama ujeedooyin kale oo ganacsi iyadoon lagaa helin codsi ama ogolaansho hore.
Dhamaan waxyaabaha ku jira www.citeia.com, sida qoraallada, sawirada, sawirada, sawirada, astaamaha, teknolojiyadda, softiweerka, iyo sidoo kale naqshadeynta garaafka iyo koodhadhka asalka ee u dhigma, waxay ka dhigan yihiin shaqo hantideeda aqooneed iska leedahay Mulkiilaha Bogga internetka, iyada oo aan midkoodna laga helin xuquuqda ka faa'iidaysiga iyaga oo aan la fahmin in loo qoondeeyay adeegsadaha wixii ka dambeeya waxa si adag lagama maarmaanka u ah isticmaalka saxda ah www.citeia.com.
Sharci Sharci iyo Xukun: Shuruudaha lagu qeexay dukumintigan waxaa xukuma sharciga Isbaanishka. Dhinacyadu, haddii ay dhacdo in xeerarka ku habboon ay u oggolaadaan, iyagoo si cad uga tanaasulaya wixii awood kale ee u dhigma iyaga, waxay u gudbinayaan kuwa Maxkamadaha iyo Maxkamadaha magaalada Barcelona, ​​si loo xalliyo wixii muran ah ama muran sharci ah ee aakhirka way muuqan kartaa.
Waajibaadka adeegsadayaasha: Isticmaalayaasha adeegyada www.citeia.com Waxay ballan qaadayaan inay u hoggaansamaan sharciga hadda jira una adeegsadaan si waafaqsan caadooyinka wanaagsan, anshaxa iyo nidaamka bulshada. Sidoo kale, waxay ku qasban yihiin inay u hoggaansamaan xeerarka lagu faahfaahiyay qoraalkan sharciga ah iyo inay u hoggaansamaan qodobbada xukuma helitaanka iyo adeegsiga degelkan.
Boggan wuxuu ka soo horjeedaa burcad badeednimada ama wax kasta oo kale oo sharci darro ah wuxuuna cambaareynayaa dhaqan kasta oo lid ku ah xuquuqda hantida aqooneed ama nooc kasta oo kale. Isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inuu si sax ah oo xalaal ah u adeegsado websaydhka iyo waxyaabaha ay bixiyaan isticmaaleyaasha kale, iyadoo la raacayo sharciga quseeya, ogeysiiskan, akhlaaqda guud ahaan la aqbalay iyo caadooyinka wanaagsan iyo nidaamka guud. Sidan oo kale, isticmaaluhu waa inuu ka fogaadaa sameynta adeegsi aan la oggolaan ama khiyaano ah oo websaydhka ah iyo / ama waxyaabaha ku jira ujeeddooyin sharci darro ah ama saameyn.
5. Ka reebitaanka dammaanadaha iyo masuuliyadaha
Waxyaabaha ku jira WEBSITE-KA Waa dabeecad guud waxayna u adeegtaa oo keliya ujeedooyin xog-ogaal ah, iyada oo aan si buuxda loo damaanad qaadin marin u helka dhammaan waxyaabaha, ama dhammaystirkeeda, saxnimadeeda, ansaxnimadeeda ama waqtigeeda mid kasta oo ka mid ah xilliyada marin loo helo. Sidoo kale, ku-habboonaanteeda lama damaanad-qaadi karo, sidaa darteed www.citeia.com waa laga reebay, waana la saamaxay, illaa inta ay u oggol yihiin xeerarka hadda jira, wixii mas'uuliyad ah ee ku saabsan waxyeellooyinka nooc kasta oo ka dhasha:
Awood la'aanta helitaanka WEBSITE-KA o la'aanta run ahaanta, saxsanaanta, dhammaystirka iyo / ama waqtigeeda waxyaabaha ku jira, iyo sidoo kale jiritaanka xumaan iyo cillado dhammaan noocyada waxyaabaha la soo gudbiyey, la faafiyey, la kaydiyey, oo loo diyaariyey kuwa laga soo mariyey lafteeda ama adeegyada la bixiyo.
Joogitaanka fayras ama waxyaabo kale oo ku jira waxyaabaha sababi kara in wax laga beddelo nidaamyada kombiyuutarka, dukumiintiyada elektaroonigga ah ama xogta USER.
Isticmaalka WEBSITE-KA jebinta qawaaniinta hadda jira, khayaanada sharciga, lid ku ah caqiidada wanaagsan ama nidaamka guud, jebinta adeegsiga ganacsiga iyo taraafikada internetka, iyo sidoo kale jebinta waajibaadka USER waxaa laga soo qaatay ogeysiiskan sharciyeed ee ka dhashay isticmaalka qaldan ee isticmaalka WEBSITE-KA.
Gaar ahaan, www.citeia.com Mas'uul kama aha ficilada dhinacyada saddexaad taas oo macnaheedu noqon karo ku tumasho xuquuqda hantida aqooneed iyo midda warshadaha, sirta ganacsiga, xuquuqda sharafta, asturnaanta shaqsiyadeed iyo tan qoyska iyo sawirka laftiisa, iyo sidoo kale xeerarka ku saabsan tartanka aan caddaaladda ahayn iyo xayeysiinta sharci darro ah.
Sidoo kale, www.citeia.com waxaa si cad looga cafiyey wixii mas'uuliyad ah ee la xiriira macluumaadka ka baxsan tan WEB PAGE isla markaana aanu si toos ah u maamulin maareeyahayagu; iyadoo la fahmayo in shaqada xiriiriyeyaasha iyo iskuxirayaasha 'hyperlinks' ee ka muuqda WEBSITE-KA Waa si gaar ah in loogu wargeliyo isticmaalaha jiritaanka ilo kale oo awood u leh inay ballaariyaan waxyaabaha la soo bandhigay.
www.citeia.com ma damaanad qaadayo ama mas'uuliyad ka saareyso hawlgalka ama marin u helka boggaga isku xiran; mana soo jeedinayso, ku martiqaadayso ama ku talin mayno in la booqdo iyaga, markaa masuul kama noqonayso natiijada la helay.
www.citeia.com mas'uul kama aha sameynta xariiro isku xir ah dhinacyada saddexaad.